မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဒီ လို ထူးခြား တဲ့ တက္ကစီ ကားဆရာ ရှိတယ်ဆိုတာ အများသိအောင် ရှဲပေးပါ !!! - Thadin
Homeကြားသိရသမျှမြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဒီ လို ထူးခြား တဲ့ တက္ကစီ ကားဆရာ ရှိတယ်ဆိုတာ အများသိအောင် ရှဲပေးပါ !!!
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဒီ လို ထူးခြား တဲ့ တက္ကစီ ကားဆရာ ရှိတယ်ဆိုတာ အများသိအောင် ရှဲပေးပါ !!!
September 30, 2018 kanhtoo shin ကြားသိရသမျှ Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဒီ လို ထူးခြား တဲ့ တက္ကစီ ကားဆရာ ရှိတယ်ဆိုတာ အများသိအောင် ရှဲပေးပါ !!!
ထူးခြား တဲ့ တက္ကစီ ကား ဆရာ
ဒီနေ့မနက် ဗဟို စည်ကနေ ပါရမီ သွားဖို့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိတဲ့ အငှား ယာဉ် တစီး ကိုတားလိုက်တော့ မလှမ်းမကမ်းမှာရပ်ပါတယ်
ပါရမီ ကို ဘယ်လောက်လဲ လို့ မေးတော့ ဘာမှမ ဖြေပဲကား ပေါ်တက် ဖို့ ပဲ လက်ပြ လို့ ဝင်ထိုက်လိုက်ပါတယ်
ကား ထိုင်ခုံ တွေ ကလည်း သပ်ယပ်သန့်ရှင်း လို့ အဲယားကွန်းကလည်း အေးလို့ ကားဆရာကလည်း မွန်မွန်ရည်ရည် သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် နောက်ကားပေါ်မှာ စကားပြော ဖြစ်တော့ အံ့သြ ရပါတယ်
ကါးခ က အဆင်ပြေသလို သာပေးပါတဲ့ ကျွန်တော်က တော့ ခရီးသွားလို ရာ လိုက်ပို့ လိုက် တာပါပဲတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ သီလရှင်တွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် တွေ ဆိုရင် အခမဲ့ပဲပို့ ပေးပါတယ်တဲ့ အခု လည်း မွေးခါနီး ကိုယ်ဝန်ဆောင် တယောက်ကို ဗဟိုအမျိုးသမီဆေးရုံ ကို ပို့ပေး ခဲ့တာပါတဲ့ ဇျေး မပြောတော့ သူတို့ ခမျာ တထိတ်ထိတ်နဲ့ နောက်တော့ မယူပါဘူး ဆ်ုတော့ အံသြ ဝမ်းသာသွားကြသတဲ့
ကျွန်တော့်မှာ ဒီလို မျိုးကား ၂ စီးရှိသေးတယ် အဲဒီကား တွေ ကို အငှားချထားတော့ ပုံမှန်ဝင်ငွေ လေး ရှိနေပါတယ် ဒီကား ဆွဲတာကတော့ ကုသိုလ်ရရင် ပဲကျေနပ်ပါတယ် တဲ့ ဆရာ့အသိ ထဲမှာ ရဟန်းသံဃာတွေခရီးသွားဖို့လိုရင်လည်း ကျွန်တော်ကူညီပါ့မယ်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပါပေးသွားတယ် ဗျာ
ပါရမီရောက်လို့ ကျွန်တော် ကား ခပေးတော့ များပါတယ်တဲ့ ဗျာ ကျွန်တော် လည်း ခင်ဗျားရဲ့ အလှူမှာ ကုသိုလ်ပါဝင်တာပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်
ကဲ အံ့သြ စရာ မကေါင်းဘူးလား ဗျာ မရသေးတဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေရဖို့ ရပြီးတဲ့ စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေ တိုးတက်ဖို့ တရားတဲ့နည်း လမ်းရော မတရားတဲ့ နည်းလမ်း နဲ့ပါ ရှာဖွေနေကြတဲ့ လူ့ လောကကြီးမှာ ဒီလို လူမျိုးလည်းရှိ သေးတာ ဝမ် သာကြည်နူး ချီးကျူး စရာ မဟုတ်လားဗျာ
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ ဟာ ကမ္ဘာ့ ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ပါပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ စေတနာ အကေါင်းဆုံး နိုင်ငံ most generous countries တွေထဲမှာ လည်း ပထမ ဒုတိယ ရနေတဲ့ နိုင်ငံပါ
ခင်ဗျား အကြောင်း fB မှာ ရေး ရမလား ဆိုတော့ ရေးခွင့်ပေးလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ချီးကျူး လေးစားပါ တယ် ကို ဉာဏ်လင်းနိုင် ရေ
Credit , San win
ထူးခွား တဲ့ တက်ကစီ ကား ဆရာ
ဒီနမေ့နကျ ဗဟို စညျကနေ ပါရမီ သှားဖို့ သပျသပျရပျရပျ ရှိတဲ့ အငှား ယာဉျ တစီး ကိုတားလိုကျတော့ မလှမျးမကမျးမှာရပျပါတယျ
ပါရမီ ကို ဘယျလောကျလဲ လို့ မေးတော့ ဘာမှမ ဖွပေဲကား ပျေါတကျ ဖို့ ပဲ လကျပွ လို့ ဝငျထိုကျလိုကျပါတယျ
ကား ထိုငျခုံ တှေ ကလညျး သပျယပျသနျ့ရှငျး လို့ အဲယားကှနျးကလညျး အေးလို့ ကားဆရာကလညျး မှနျမှနျရညျရညျ သနျ့သနျ့ပွနျ့ပွနျ့ နောကျကားပျေါမှာ စကားပွော ဖွဈတော့ အံ့သွ ရပါတယျ
ကါးခ က အဆငျပွသေလို သာပေးပါတဲ့ ကြှနျတျောက တော့ ခရီးသှားလို ရာ လိုကျပို့ လိုကျ တာပါပဲတဲ့ ဘုနျးကွီးတှေ သီလရှငျတှေ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျ တှေ ဆိုရငျ အခမဲ့ပဲပို့ ပေးပါတယျတဲ့ အခု လညျး မှေးခါနီး ကိုယျဝနျဆောငျ တယောကျကို ဗဟိုအမြိုးသမီဆေးရုံ ကို ပို့ပေး ခဲ့တာပါတဲ့ ဇြေး မပွောတော့ သူတို့ ခမြာ တထိတျထိတျနဲ့ နောကျတော့ မယူပါဘူး ဆျုတော့ အံသွ ဝမျးသာသှားကွသတဲ့
ကြှနျတေျာ့မှာ ဒီလို မြိုးကား ၂ စီးရှိသေးတယျ အဲဒီကား တှေ ကို အငှားခထြားတော့ ပုံမှနျဝငျငှေ လေး ရှိနပေါတယျ ဒီကား ဆှဲတာကတော့ ကုသိုလျရရငျ ပဲကနြေပျပါတယျ တဲ့ ဆရာ့အသိ ထဲမှာ ရဟနျးသံဃာတှခေရီးသှားဖို့လိုရငျလညျး ကြှနျတျောကူညီပါ့မယျတဲ့ ဖုနျးနံပါတျပါပေးသှားတယျ ဗြာ
ပါရမီရောကျလို့ ကြှနျတျော ကား ခပေးတော့ မြားပါတယျတဲ့ ဗြာ ကြှနျတျော လညျး ခငျဗြားရဲ့ အလှူမှာ ကုသိုလျပါဝငျတာပါလို့ ပွောလိုကျပါတယျ
ကဲ အံ့သွ စရာ မကေါငျးဘူးလား ဗြာ မရသေးတဲ့ စညျးစိမျခမျြးသာတှရေဖို့ ရပွီးတဲ့ စညျးစိမျခမျြးသာတှေ တိုးတကျဖို့ တရားတဲ့နညျး လမျးရော မတရားတဲ့ နညျးလမျး နဲ့ပါ ရှာဖှနေကွေတဲ့ လူ့ လောကကွီးမှာ ဒီလို လူမြိုးလညျးရှိ သေးတာ ဝမျ သာကွညျနူး ခြီးကြူး စရာ မဟုတျလားဗြာ
ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံ ဟာ ကမ္ဘာ့ ဆငျးရဲတဲ့ နိုငျငံတှမှော ပါပမေဲ့ ကမ္ဘာ့ စတေနာ အကေါငျးဆုံး နိုငျငံ most generous countries တှထေဲမှာ လညျး ပထမ ဒုတိယ ရနတေဲ့ နိုငျငံပါ
ခငျဗြား အကွောငျး fB မှာ ရေး ရမလား ဆိုတော့ ရေးခှငျ့ပေးလို့ တငျပေးလိုကျပါတယျ
ခြီးကြူး လေးစားပါ တယျ ကို ဉာဏျလငျးနိုငျ ရေ
နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးမယ့် အစားအစာများ
This Month : 34007
This Year : 175464
Total Users : 534488
Total views : 2417815